In Lionel Messi Uu Xor U Yahay Go'aanka Mustaqbalkiisa, In Magaca Rodrigo Miiska Tababaraha Saaran Yahay Iyo Madaxweynaha Barcelona Oo Ka Hadlay Dhawr Arrimood | Laacib.net
In Lionel Messi Uu Xor U Yahay Go’aanka Mustaqbalkiisa, In Magaca Rodrigo Miiska Tababaraha Saaran Yahay Iyo Madaxweynaha Barcelona Oo Ka Hadlay Dhawr Arrimood
January 28, 2020 Abdiwahab Ahmed Comments Off on In Lionel Messi Uu Xor U Yahay Go’aanka Mustaqbalkiisa, In Magaca Rodrigo Miiska Tababaraha Saaran Yahay Iyo Madaxweynaha Barcelona Oo Ka Hadlay Dhawr Arrimood
Madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona, Joseph Maria Bartomeu ayaa xaqiijiyey in kooxdiisu ay u dhaqaaqayso weeraryahanka Valencia ee Rodrigo Moreno, kaas oo ay u doonayaan inuu noqdo beddelka Luis Suarez oo qalliin lagu sameeyey ku seegaya inta ka hadhay xili ciyaareedka.
Barcelona iyo Valencia ayey u socdaan wada-xaajood ay kula kala wareegayaan Rodrigo oo hore ugu soo ciyaaray kooxaha Real Madrid iyo Benfica ka hor intii aanu imanin Valencia.
Madaxweynaha Valencia, ayaa xalay lagu arkay isaga oo jooga magaalada Barcelona oo dhiggiisa Barca uu ay ka wada hadlayeen dhamaystirka heshiiska uu weeraryahanka reer Spain ku aadayo dhinaca Catalonia, laakiin saacado kaddib markii uu soo baxay warka sheegayay in madaxda Valencia ay joogaan Barcelona, waxa warbaahinta la hadlay Bartomeu oo xaqiijiyey in meel fiican ay wax marayaan.
“Kama hadalno ciyaartoyga kooxaha kale ka imanaya, laakiin magaca Rodrygo miiska tababareyaasha ayuu saaran yahay, beddelna wuu iman doonaa. Ma garanayo inuu noqon doono mid ka yimaadda Barcelona B ama dibedda kooxda, laakiin waxa jira ciyaartooyo badan oo aan jecelahay.” Ayuu yidhi Madaxweyne Josep Maria Bartomeu.
Maalmahan waxa soo baxayay warar mugdi gelinaya mustaqbalka Lionel Messi oo la sheegayay inuu doonayo inuu ka tago Camp Nou haddii aan kooxda isbeddel weyn lagu samaynin, hase yeeshee Madaxweyne Bartomeu waxa uu tibaaxay in laacibka reer Argentine uu xor u yahay inuu go’aan ka gaadho mustaqbalkiisa, waxaanu yidhi: “Way uga dhamaan kartaa Barcelona marka uu rabo. Xidhiidhka uu la leeyahay Barcelona waligii wuu jirayaa, waxaana uu leeyahay xirfad uu in badan halkan kaga sii ciyaaro. Leo Messi muddo ayuu sii joogi doonaa.”
Ugu dambayn, Bartomeu waxa uu ka hadlay guul-darradii kooxdiisa Barcelona kasoo gaaadhay kulankii Valencia oo 2-0 ku garaacday Sabtidii, waxaanu yidhi: “Anigu ma walaacsani. Si adag ayaanu u shaqaynaynaa oo iskugu dayaynaa, waana in aanu ciyaarno dhamaan LaLiga Santander iyo Champions League labadabada. Taageereyaasha Barcelona way u walaacsan yihiin kooxda, kaliya waanu guul-darraysanay laakiin qaabkii aanu u ciyaarnay kulamadii Copa del Rey ee Leganes iyo LaLiga ee ka dambeeyey ma joojinayno. Waxa aanu haysanaa tababare Cusub oo Setien ah, waananu ku kalsoonahay waxa uu qabanayo.”